Proxy Server ဆိုတာဘာလဲ ?? - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home IT ဗဟုသုတ Proxy Server ဆိုတာဘာလဲ ??
Proxy Server ဆိုတာဘာလဲ ??
Min Oaker at 1:31:00 PM IT ဗဟုသုတ,
Proxy Server ဆိုတာဟာ Internet Connection ကို Sharing
ပေးတဲ့နေရာမှာ သုံးတဲ့ Serverတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။Internet Connection
ကိုSharing လုပ်ပေးတယ်ဆိုတာဟာ Internet Connection
လေးတစ်ခုကိုကိုယ့်ရဲ့Local Area Network တွင်းကComputer
တိုင်းသုံးစွဲနိုင်အောင်လို့ ကြားခံဝင်ရောက်လုပ်ကိုင် ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလို ကြားခံဝင်ရောက်ပြီးInternet Connectionကို Share
လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်း (၃) မျိုးရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့-
(1) ICS ( Internet Connection Sharing Service )
(2) NAT ( Network Address Translation Service )
(3) Proxy Server တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Proxy Server ကိုပြရပါလိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
အကြောင်းပြစရာတွေ အများကြီးရှိနေလို့ပါပဲ။ တခြားနည်းလမ်းတွေရဲ့
ဟာကွက်တွေမကောင်းတာလေးတွေကိုProxy Server မှာ မတွေ့ရသလို
Proxy Serverရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တော်တော်များများကိုလည်း တခြားနည်းလမ်းတွေမှာ
လုံးဝမရနိုင်ပါဘူး။ICSဆိုတဲ့Internet Connection Sharing Service
ကို အသုံးပြုခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့Networkအတွင်းမှာComputer
အလုံးရေ254လုံးအထိပဲ ချိတ်ဆက်ခွင့်ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ICS Service
ကိုRunထားပြီးInternet Connection Sharingပေးတဲ့နည်းလမ်းကိုသုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်
Subnet Mask 255.255.255.0အတွင်းကAddress တွေကိုသာ သုံးစွဲနိုင်ခွင့်ရကြမှာပါ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ICS Service ဟာ သူ့ရဲ့Local Network Addressကို192.168.0.0အဖြစ်Defaultအရ အသေသတ်မှတ်ထားတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ပြင်ဆင်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။
ဒါ့အပြင်ICS Serviceသည်Network Trafficကိုလည်းမထိန်းနိုင်ပါဘူး။အဲနောက်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့NAT (Network Address Translation Service)သူလည်းInternetကိုSharingလုပ်ပေးနိုင်တာမှန်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သူကICS Serviceထက် ပိုသာတဲ့အချက်က သူ့ရဲ့Local NetworkကိုIPaddressသတ်မှတ်ရာမှာ
192.168.0.0 Network တစ်ခုတည်းပုံသေ သတ်မှတ်ထားတာမျိုးမရှိတော့ပါဘူး။ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာNetwork Addressစ်ခုကို ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ် ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့NAT ServiceမှာBasic Firewall functionပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့Local Networkကို
ပိုပြီးလုံခြုံမှုရှိလာစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ICS Serviceနဲ့တူတူမကောင်းတဲ့အချက်လေးကတော့ သူဟာလည်းNetwork Traffic ကိုလုံးဝမထိန်းထားနိုင်ပါဘူး။ကဲ ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဇာတ်လိုက်ကျော်ကြီးProxy Serverကကော ၊ ဟုတ်ကဲ့။Proxy Server ရဲ့ကောင်းချက်တွေကတော့ အများကြီးပါပဲ။ ဟိုServiceနှစ်ခုမှာ လုံးဝမဖြစ်နိုင်တာတွေကိုProxy Serverကကောင်းကောင်း
ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အရင်ဦးဆုံးကိုယ့်ရဲ့Local NetworkကိုAddressသတ်မှတ်ရာမှာလည်း
ကြိုက်တဲ့IP Address Class ထဲက ပေးချင်တဲ့Addressကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီး သတ်မှတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့Proxy Serverဟာ ကိုယ့်ရဲ့Local Network ထဲကကွန်ပျူတာတွေကိုICSနဲ့NATတို့မှာလိုမျိုး Internetပေါ်ကိုတိုက်ရိုက်ချိက်ဆက်ပေးတဲ့ သဘောမျိုးမဟုတ်တော့ပဲProxy Server
ရဲ့Web Proxy Serviceကနေ ဖွင့်ပေးထားတဲ့Portတစ်ခုကနေပဲ ချိတ်ဆက်သုံးစွဲစေတာဖြစ်တဲ့အတွက်securityမှာလည်းအများကြီးလုံခြုံသွားစေပါတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့Local Networkထဲကclientတွေကို ပေးမသုံးချင်တဲ့Websiteတွေကိုပိတ်ထားလိုရပါတယ်။
Local Networkထဲက ဘယ်Computersတွေကိုတော့ဖြင့်Internetပေးမသုံးချင်ဘူးလဲ ၊Internetပေးသုံးထားတဲ့Clientတွေကိုလဲဘယ်အချိန်တွေအတွင်းမှာပဲ ပေးသုံးမျာလဲ စတဲ့security permissionတွေကိုလည်း စိတ်ကြိုက်သတ်မှတ်ကန့်သတ်ထားနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်Local NetworkထဲကClient Computerတစ်လုံးကWebsiteတစ်ခုကိုလှမ်းခေါ်သုံးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ အဲဒီWebsiteကိုProxy Server က သူ့ရဲ့cacheထဲမှာယာယီသိမ်းလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကနေ သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတိုင်းတစ်ခုအတွင်း(သို့မဟုတ်)သတ်မှတ်ထား
တဲ့cacheပမာဏ မပြည့်လွန်မီအချိန်အတွင်း(အဲဒါတွေကိုProxyServerမှာ ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်သတ်မှတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။)မှာ နောက်ထပ်Client Computerတစ်လုံးက
အဲဒီWebsiteကိုပဲ ထပ်မံခေါ်ယူသုံးစွဲခဲ့မယ်ဆိုရင်Proxy Serverဟာ သူ့ရဲ့cache
ထဲကနေပဲ ထုတ်ပေးလိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်NetworkTrafficကို ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ သဘောသက်ရောက်ပြီးInternet speed ကို ပိုမိုမြန်ဆန်စေပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့Local Networkထဲclient computerတွေ ဘယ်Websiteတွေကို ခေါ်ယူသုံးစွဲသွားကြတယ်ဆိုတာကိုလည်းProxy ServerထဲကLog Fileထဲမှာ ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့Local NetworkထဲကComputer
တွေကိုInternetပေးသုံးတဲ့နေရာမှာလည်း သတ်မှတ်ထားတဲ့usernameနှင့်Passwordကိုသိမှအသုံးပြုခွင့် ရအောင်လည်း လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ကဲကဲ ဆက်ပြောရင်တော့ ရေးတဲ့ကျွန်တော်လည်းလက်ညောင်း စာဖတ်သူလည်းမျက်စိတွေတောင်ညောင်းသွားမယ်။အခုလောက်သိထားမယ်ဆိုရင်လည်း
လုံလောက်ပါတယ်။Proxy Server ကို ဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးရတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်း မျက်လုံးထဲမှာမြင်ယောင်လာအောင်ပုံဆွဲပြလိုက်ပါတယ်နော်။
Credit >> Youth Computor